08/11/2018 - Page 2 sur 3 -
Fanafihan’ny dahalo tany Morondava : Nikatona ny biraom-pidianana
Tsy mifidy fotoana intsony ny dahalo manao fanafihana mitam-piadiana amin’ny andro mazava. Nitrangana fanafihan-dahalo nirongo basy tany amin’ny fokontany Befasy kaomina Mahasoa distrikan’ny Morondava, ny andron’ny fotoam-pifidianana ny alarobia 7 Novambra lasa teo. Nirefodrefotra ny …Tohiny
Fifidianana : Manjakaray
Anisan’ireo biraom-pifidianana nahitana tsy fahampiana teo amin’ny kojakoja ilainy ny biraom-pifidianana tao amin’ny efitrano faha-2 tetsy amin’ny EPP Manjakaray. Biraom-pifidianana ho an’ny mponina ao Anjanahary II S. Biraom-pifidianana roa no tao anatin’io efitrano io ka …Tohiny
Didec : Mihevi-tena ho ambonin’ny lalàna
Raha natao andro tsy hiasana, tsy hianarana ny andron’ny fifidianana omaly, araka ny didim-panjakana nivoaka dia fantatra fa mbola nisy sekoly ihany nandingana izany lalàna izany. Izany hoe, nanohy ny fampianarana hatrany ary maraina sy …Tohiny
Fanakorontanana ny fifidianana : Olona 6 voasambotra nanaparitaka trakta
Tsy kely lalana ny ratsy. Nisehoana tranga faminganana na/sy fanasoketana kandidà ny alin’ny 5 novambra nifoha ny 6 novambra teo. Tamin’ny alalana fanaparitahana trakta izay mirakitra fanakorontanana saim-bahoaka no nataon’ireo olona nirahina peta-drindrina manerana ireo …Tohiny